Fandraisana mpialokaloka ao Frantsa : Halala-tanana sa ho feno fanahiana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Septambra 2015 8:48 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Deutsch, Français
Fihetsiketseham-panohanana ireo mpitsoa-ponenana any an-tanàndehibe eoropeanina (loharano isan-karazany)
Nidina an-dalamben'ny tanàna lehibe ao Eoropa tamin'ny 12 Septambra 2015 lasa teo ny olona an'hetsiny ho fanehoam-piraisankina amin'ireo mpitsoa-ponenana manavatsava an'i Mediteranea amin'ny alalan'ny sambo tsizarizary.
Samy manana ny fomba fandraisany ireo Syriana mpitsoaponenana ny manerana an'i Eoropa. Samy manana ny politikany ihany koa ny isam-pirenena na eo amin'ireo politisiana izany na eo amin'ireo fikambanana mpanampy an-tsitrapo. Na dia eo aza ny ezaka handrindrana ny fepetra fandraisana olona ao amin'ny Vondrona Eoropeana, dia miharihary loatra ny fahasamihafan'izany fepetra izany isam-pirenena: i Alemaina izay mitsinjo ny handray Syriana mpitsoaponenana 98 700 amin'ity taona 2015 ity (ary 500 000 isan-taona amin'ireo taona ho avy manaraka eo) nefa ny tsinjovon'i Frantsa dia 6 700 amin'ity taona 2015 ity (ary 24 000 amin'ny herintaona sy ny taona iray manaraka izany) ary i Angletera dia mitsinjo handray mpitsoa-ponenana 7000 (20 000 ao anatin'ny dimy taona manaraka).
Fampitambarana ny rakitahiry momba ireo mpitsoaponenana ao Eoropa (loharanombaovao: The Economist sy ny The Independent)
Mihamitombo isa ihany koa ireo fisantaran'andraikitra ataon'ny olompirenena te-hiray hina amin'ireo mpitsoa-ponenana. Any Islandy, 10.000 ny Islandey nanokatra pejy Facebook iray ary nanomboka fanangonan-tsonia ho fandraisana mpitsoaponenana. Any Alemaina, vondron'olompirenena iray no nanangana sehatra «Tonga soa ny mpitsoaponenana» izay manangona ireo tokantrano te-hanokatra ny varavarany amin'ny mpitsoa-ponenana. Maro ny toeram-panangonam-bola najoro hanomezana sakafo ireo mpifindramonina.
Ao Frantsa, iray amin'ireo fisantaran'andraikitra ny an'ny fikambanana SINGA, izay mamaritra ny tenany ho “fikambanan'olombelona te-hifankafantatra sy te-hifankahazo bebe kokoa”. Najoron'ny Singa ny tetikasa CALM (Comme à La Maison na Tahaka ny ao an-trano) sehatra mampifandray ireo tokantrano te-handray mpitsoaponenana ao Frantsa. Nohazavain'ny Singa ary fa :
Ahafahan'ny mpitsoa-ponenana tsy nahazo fialofana tsara na tsy nahazo fonenana raikitra amin'olontsotra ity tambajotra ity, miankina amin'ny fikambanan'ireo olompirenena mihamitombo isa te-hiditra amin'ny fandraisana mpitsoaponenana ny sehatra, ary aoriana kely ao, apetraka amin'ny sehatra an-tserasera ahafahana mampisy fiantraikany lehibebe kokoa. Tsy maintsy mamaly, ankoatra ny fampiatranoana, ireo filàna lehibe sy mihamivelatra amin'ny fampidirana miasa sy fampidirana ao anatin'ny fiarahamonina io fitaovana fametrapetrahana ny fandrindrana io.
Ho fanatontosana izany, dia natsangan'ny fikambanana ny fisoratana anarana antserasera mety ho mpandray vahiny.
Fangon'ny tetikasa CALM
Misy tranonkala an-tserasera an'ny Libération nanangona tamin'ny sarintany iray ireo fikambanana rehetra tonga manao fanampiana ireo mpitsoaponenana ao Frantsa, afahafan'ny tsirairay miditra an-tsehatra ao amin'ny tanàna misy azy avy :
Ireo fikambanana tonga manampy ireo mpitsoaponenana ao Frantsa amin'ny alalan'ny Libération en ligne
Misy anefa ampahany betsaka amin'ny mponina mijery ny fahatongavan'ny mpitsoaponenana amin'ahiahy. Nasehon'ny fitsapan-kevitra nataon'ny Odoxa tamin'ny 5 septambra fa 55%-n'ny Frantsay no manohitra ny hanaovan'i Frantsa tahaka an'i Alemaina ka hanamora ny fahazoana ny satan'ny mpialokaloka amin'ny mpifindramonina (mety ho efa niova io tarehimarika io tao anatin'ny andro vitsivitsy izao).
Tahaka izany izao i Isabelle manazava fa tsy mbola azony hatreto izao miova amin'izao fotoana izao :
Mpifindramonina, mpialokaloka, tonga hifindramonina, tsy dia miharihary hatrany ny fahasamihafana. Tokony azavaina aminay mazava aloha ny fahasamihafany.
Fabien mieritreritra fa any amin'ny fototra no ijerena ny olana:
Takatry ny saiko ny ataon'ireo olona ireo fa tsy manana safidy hafa ankoatra ny mandositra ny ady ry zareo. Ny olana dia ny fiantraikan'ny ady no mahasahirana antsika fa tsy ny antony. Tompon'andraikitra feno amin'ny toe-draharaha ao Syria sy Lybia anefa isika.
Sylvain Attal manazava ny antony tsy ahafaha-manamaritena amin'izao fisalasalana izao:
Reheefa tsy nahay sy tsy nahavita niditra an-tsehatra efa-taona lasa izay, raha te-hitazona ny fanjohin-kevitra ao amintsika ihany isika, ny adidintsika dia ny manomana am-pahamendrehana ny fandraisana ireo mpitsoaponenana ireo. Dia afa-mandefa hafatra hoan'ireo mety hanatevin-daharana ny ISIS te-hamboly korontana eto amin'ny tanintsika isika avy eo: tsy manohitra ny miozolomana izahay. [..] Tsy misy fitaovam-piarovana hampihemotra ireo te-handositra ny ady te-hanome hoavy mamiratra ny zanany hitady izany eto Eoropa. Tsy voasarika, tahaka izay andrenesantsika azy matetika, noho ny fahalalahan-tanan'ny rafi-panampiana ara-tsosialy izy ireo fa maniry ny hahita fanararaotra hameloman-tena amim-pahamendrehena eto. Raha tsy izany manko dia tsy nifidy an'i Alemaina na i Angletera aloha izy ireo… fa i Frantsa! [..] Ao Alemaina izao dia tsy mieritreritra i Angela Merkel fa hangalatra ny asan'ny Alemana ireo mpitsoaponenana ireo fa hoe mety ho afa-mandray anajra amin'ny fanovana ny firenena ho amin'ny tsaratsara kokoa. Mieritreritra izy fa mametraka zavatra hamokatra tsara. Avy amin'izany izy no manome lesona amin'i Eoropa tsy ara-maoraly ihany fa ara-toekarena ihany koa.
Raha misy ary ireo maneho ny ahiahiny, dia misy diplaomaty frantsay iray nanararao-paty manoloana ny voina mahazo ny mpitsoa-ponenana. Niaiky ny consul honoraire an'i Frantsa ao Torkia, Françoise Olcay, fa nanararaotra ny famoizam-pon'ny mpifindramonina te-hiditra ao Eoropa ka nivarotra lakana fingotra sy akanjom-piarovana [gilets de sauvetage] tamin'ny mpifindramonina sy mpialokaloka hi-hihazo an'i Gresy am-panandàna ny ainy. Ny lahatsary eto ambany no mamehy ny fanamarinan-tenan'i Olcay :
Raha nanontaniana izy hoe fa maninona izy no tsy mampitsahatra ny varotra ataony dia novaliany fa raha mijanona izy dia misy hafa maro hanohy ny zavatra nataony. Nahantona tamin'ny asany i Olcay tamin'ny 12 Septambra. Erika Colognon Hajaji, sady mpanao gazety no bilaogera, mieritreritra fa taratra ankapoben'ny tsy fahombiazan'ny diplaomasia amin'ny fifehezana ny krizy amin'izao fotoana izao ny fihetsiky ny consule honoraire :
Ny diplaomasia tokoa no singa banga miteraka ny fibolisarana rehetra nataontsika sy niteraka ireo ady ‘fisorohana’ rehetra natao sy ny fanokanana ny lalam-pivezivezen'ny mpifindramonina, ary nahatonga ihany koa ny fahazoan'ny integrista an'i Libya vantany vao noahafahan'i Sarkozy. Ny lamokany voalohany dia andraikitr'io diplaomasia io. Tsy maintsy mahay miasa tsaratsara kokoa ho afa-miantsoroka ny andraikiny ny diplaomasiantsika amin'ny ankapobeny, ny an'ny ao Afrika, ny an'ny ao Azia, ny eto Frantsa, ny eto Eoropa.